Fahamka go’aanka – Asylum – JRS Romania
Baro waxaad samayn karto marka xigta iyadoo ku xidhan go’aanka laga gaadhay kormeeraha guud ee laanta socdaalka arjigaaga magangalyo.
A. Go’aanka togan: Heerka Qaxootiga ama Ilaalin hoosaad
Micnaheedu maxay tahay?
Tan macnaheedu waa inaad heleyso magangelyo Roomaaniya. Waxaa lagu siinayaa “qaxooti qaxooti” ama “ilaalin dhexdhexaad ah” muddo aan xad lahayn, ilaa sababaha aad u heshay badbaadin aysan jiri doonin. Waxaad maqli kartaa dadka oo waliba adiga kugu tilmaamaya “ka-faa’iideystaha magangalyada caalamiga ah”.
Xuquuqdee ayaan lahaan doonaa?
Ma jiraan faraqyo farabadan oo u dhexeeya “xaaladda qaxootinimo” iyo “ilaalin heer hoosaad”. Waxaad heli doontaa rukhsad degenaansho oo ansax ah muddo cayiman, oo ay suuragal tahay kordhinta. Waxaad yeelan doontaa xuquuq isku mid ah (waxyaabaha aad sameyn karto, sida iskuulka inaad aado iyo helitaanka daryeel caafimaad) iyo waajibaadka (waxyaabaha ay tahay inaad sameyso, sida ixtiraamka qawaaniinta qaarkood) sida caruurta reer Romania.
Waxa kale oo aad ka qaybqaadan kartaa “barnaamijka is dhexgalka gobolka” oo loogu talagalay in lagu taageero joogitaankaaga iyo is-dhexgalkaaga Roomaaniya. Waa inaad isqortaa waqtiga si aad uga faa’iideysato barnaamijkan gaarka ah.
Sida ugu dhaqsaha badan ula hadal wakiilkaaga sharci, sarkaalka isdhaxgalka ee xarunta gobolka ama ururada samafalka ah si aad u ogaato waxaad sameyn karto hada oo aad difaac ku leedahay Romania iyo sida ay kuu caawin karaan.
Haddii aad jeceshahay, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad ka cawdo go’aanka aad ku hesho ilaalinta hoosaadka. Xaaladdan oo kale, maxkamaddu waxay go’aansan doontaa inay ilaaliso kaalmada hoosaadka, baajiso, ama ku siiso qaxootinimo. Ha ku degdegin go’aan. Kala hadal wakiilkaaga sharci iyo la-taliyaha sharciga ee NGO-ga xaaladaada gaarka ah iyo fursadaha aad heli karto.
Ma keeni karaa qoyskayga Romania?
Haddii aad jeceshahay inaad dib ugula modowdo Roomaania qaar ka mid ah xubnaha qoyska ee hada ku nool dibedda dalka, waxaad tan ku samayn kartaa nidaamka loo yaqaan “isukeeninta qoyska”. U sheeg wakiilkaaga sharci iyo sarkaalka is-dhexgalka bulshada sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hanaankan warqadda hoose (oo ay soo saareen Golaha Qaranka Roomaaniya ee Qaxootiga / CNRR). Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa CNRR si aad talo u hesho..
Isukeenida qoyskaMacluumaadka la xiriira isu keenida xubnaha qoyska ee dalka dibadiisa
B. Go’aan diidmo ah
Sideen uga dacwoon karaa go’aanka diidmada ah?
Waad ka caban kartaa go’aanka diidmada ah ee laga soo qaatay kormeeraha guud ee laanta socdaalka (GII oo ingiriisi ah ama IGI oo ku yaal Roomaania) ayagoo kaa caawinaya wakiilkaaga sharciga. Xaaladdan oo kale maxkamadda ayaad tagi doontaa. Qaabka maxkamadda wuxuu qaadan karaa dhowr bilood. Inta lagu jiro waqtigan waxaad sii ahaaneysaa magangalyo-doon. Kala hadal xulashooyinkaaga qareenkaaga sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan, maadaama aad uga caban karto go’aanka diidmada ah maalmo kooban (10 maalmood ka dib markii go’aanka lagu ogaysiiyay).
Maxaa ka dhacaya maxkamadda?
Kaddib marka cabashadaada loo diro maxkamadda, wakiilkaaga sharci ayaa la ogeysiin doonaa taariikhda iyo waqtiga ay tahay inaad adigu timaado maxkamadda. Waa inaad sidoo kale weydiisataa caawimaad sharciyeed ururada aan dowliga ahayn. Qareen ayaa waliba kaa caawin doona inta lagu gudo jiro nidaamka maxkamada. Maxakamada (gudaha Roomaania: Judecătorie) waxaad awoodi doontaa inaad u sharaxdid xaaladaada garsoore, ayadoo ku caawinayo turjubaan. Waxay u badan tahay inaad u baahan tahay inaad maxkamada aado dhowr jeer ka hor intaadan go’aanka helin. Garsooraha ayaa soo saari doona go’aanka ka dib markii uu falanqeeyo dukumiintiyada iyo bayaankaaga.
Haddii maxkamadda koowaad ay go’aansato inay ku siiso “qaxooti qaxooti” ama “badbaado hoosaad”, GII ayaa ka doodi kara go’aankan maxkamadda labaad. Haddii go’aanka koowaad ee maxkamadda uu yahay mid diidmo ah, markan waxaad awood u yeelan kartaa inaad ka cabato shan maalmood gudahood ka dib markay maxkamaddu soo saartay go’aanka. Aad ayey muhiim u tahay inaad la xiriirto wakiilkaaga sharciga ama qareenka si aadan u dhaafin muddadan.
Maxakamada labaad (Roomaania: Maxkamad-yareyda) ayaa go’aansan kara midkood inuu ku siiyo ilaalin ama diido dalabkaaga. Go’aanka ay soo saartay maxkamada labaad (ee Roomaania: Maxkamad) ayaa kama dambays ah oo aan laga noqon karin. Taas macnaheedu waa looma beddeli karo hay’ad kale oo hawlgalki magangalyadiina wuu dhammaaday.
Maxaa dhacaya kadib markaan helo go’aanka ugu dambeeya ee diidmada ah?
Magangalyo-dooneyaasha ka hela go’aanka ugu dambeeya ee diidmada maxkamadda labaad waxay caadiyan haystaan 15 maalmood si ay uga baxaan Romania. Si kastaba ha noqotee, nidaamyo gaar ah ayaa lagu dabaqaa carruurta aan lala socon. Waxaad joogi doontaa xarun gaar ah oo loogu talagalay carruurta iyo dhallinta aan qaangaarin illaa ay mas’uuliyiintu caddeeyaan waalidiintaada ama xubnaha kale ee qoyska ee doonaya inay ku daryeelaan, waxaana loo arkaa inay tani kuu fiicantahay adiga.
Miyaan mar labaad codsan karaa magangalyo?
Waxaad fursad u leedahay inaad ku dalbato wado habsocod magangelyo oo cusub kormeerka guud ee Socdaalka. Si kastaba ha noqotee, codsi noocan oo kale ah waxaa la ogolyahay oo keliya haddii aad soo bandhigto sababaha cusub ee aad uga soo tagtay waddankaaga iyo sababta aad uga cabsaneyso inaad ku laabato. Waa inaad sidoo kale sharaxdid sababta aadan ugala hadlin sababahaan nidaamka magan-galyo doonkaagii hore. Waxay sidoo kale dhici kartaa in isbeddelo muhiim ah ay ka dhaceen wadankaaga kadib markii nidaamki magangalyo ee hore la dhammeeyey isbadalladaasna waxay cawaaqib xumo ku yeelan karaan xaaladaada. Haddii dalabkaaga la aqbalo, waxaad mari doontaa nidaam magangalyo oo cusub. Wakiilkaaga sharciga ah iyo ururada aan dawliga ahayn ayaa kaala talin kara ikhtiyaarkan.